Home Wararka Midowga Musharaxiinta oo si dadban isugu dhiibay Farmaajo & Doorashadii Somaliland oo...
Midowga Musharaxiinta oo si dadban isugu dhiibay Farmaajo & Doorashadii Somaliland oo socoto
Shacabka Magalaada Muqadisho ayaa waxa ka soo haray yaab iyo amakaag ka dib markii kooxdii isku magacaawday Midowga Musharaxiinta ay ku soo dhamaadeen inay ka noqdaan doorashada Aqalka Hoose dawadayaal uu Farmaajo ku boobayo kuraasta reer Waqooyiga.
Farmaajo oo u muuqda inuu isaga sidii uu doono u maamulayo doorashada aqalka hooose ayaa dardar galinyay qorshahiisa uu ku boobayo doorasahda aqalka Hoose. Waxaa socda magalaada Muqdisho diyaargarowgii ugu dambeeyey ee gobollada waqooyi kahor inta aaney berri ku dooran Muqdisho xildhibaanno ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah.
Ergada ayaa loo bilaabay tababar la xiriira doorashada, waxaa kale oo socda wacyigelin la xiriirta xeerar doorashaada iyo habraacyada kala duwn ee hubinta u baahan. Farmaajo ayaa ku hanjabay inuu bilaabayo doorashada Somaliland si ay maamullada kale ugu deydaan.
Dadka Soomaaliyeed oo rajo ka qabay Midowga musharaxiinta ayaa waxa ku yimid rajo beel iyo wal wal ay ka qabaan in Farmaajo ku soo noqdo.